Nepal Deep | ‘हक्की’ स्वभावका किसान जसले माधवलाई ‘डुब्न’बाट जोगाए, अहिले मन्त्री भए
‘हक्की’ स्वभावका किसान जसले माधवलाई ‘डुब्न’बाट जोगाए, अहिले मन्त्री भए
काठमाडौँ। तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) अस्तित्वमा हुँदा उक्त दलका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफ्नै पार्टीको सरकारको अराजकताबाट आजित भएर संसद भवनमा रोष्टममा उभिएर एउटा गीत गाएका थिए, त्यो थियो- ‘मेरो देश डुब्न लाग्यो किनारा लगाइदेउ, माझी छौ कि कोही आइ बचाइदेउ।’ त्यसपछि राजनीतिमा धेरै उतारचडाव आए। नेकपाको नै अस्तित्व समाप्त भयो। नेकपा ‘डुब्यो’। एकता तोडियो। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पुन: जागृत भए।
स्थिति कस्तोसम्म भयो भने देश डुब्न लागेकोमा विलाप गरिरहेका नेता नेपालको नै आफ्नो पार्टीमा अस्तित्व धरापमा पर्यो। प्रतिगमनको मतियार भनेर चित्रित पात्र केपी ओलीको पाउमा नेता नेपालको युद्ध मोर्चामा रहेका सहयात्री ‘कमाण्डर’हरु एकपछि अर्को गर्दै भित्रभित्रै घुडा टेके। ‘घोडामा चढेका बादशाहलाई कठालो समातेर भुइमा झार्ने’अर्थात् प्रतिगमनकारी ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्ने नेता नेपालको योजना तुहिने संकेत देखियो।
तर डुब्न लागेको नेता नेपालको डुंगा जोगाउन ‘माझी’ बनेर आए- कृष्ण कुमार श्रेष्ठ ‘किसान’। श्रेष्ठको सहयोग यस्तो घडीमा आयो कि नेता नेपालले त्यसलाई बिर्सु भने पनि सक्दैनन्। श्रेष्ठकै सहयोग र समर्थनमा अहिले नेकपा एमालेबाट निस्किएर छुट्टै आन्दोलनको नेतृत्व, अलग दलको नेतृत्व गर्ने अवसर नेता नेपाललाई मिल्यो।
ओलीले असंवैधानिक रूपमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन अदालतले बदर गरिदिएपछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका सभापति एंव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो। प्रतिनिधि सभा बैठक बस्नुअघि बसेको एमालेको स्थायी कमिटी बैठक (माधव नेपाल पक्ष अनुपस्थित)ले प्रधानमन्त्री देउवाका विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकपछि संवाददातासँग कुरा गर्दै एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले देउवाका पक्षमा मत दिनेहरू एमालेमा नरहने बताएका थिए।
श्रेष्ठले उक्त बैठकको निर्णय उल्लंघन गरिदिए। त्यो राति भएको मतदानमा उनले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका सांसदसँगै ‘फ्लोर क्रस’ गरे र देउवाका पक्षमा विश्वासको मत दिए। उनीसँगै ओली पक्षका अरू ८ सांसदले पनि देउवालाई विश्वासको मत दिए।
अदालतमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश माग्न हस्ताक्षर गरेका नेपालपक्षीय सांसदहरू योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, दीपक भट्ट, सोमप्रसाद पाण्डे, यज्ञराज सुनुवार, राजबहादुर बुढा, झपट रावल र नारायण खतिवडाले अन्तिम समयमा नेता नेपाललाई धोका दिए। देउवालाई विश्वासको मत दिनु भन्दा केही छिन अघि उनीहरु संसदबाट बाहिरिएका थिए।
श्रेष्ठले नेपाललाई यतिसम्म ढाडस दिएका थिए कि एमालेमै रहेर संसदीय दलमा केपी ओलीलाई अल्पमतमा पार्न १५/२० जना सांसद जुटाउने आश्वासन दिएका थिए।
तर नेता नेपाललाई ओलीविरुद्ध उक्साउने ‘दश भाइ’ १० बुँदे गरेर ओलीको पाउमा लम्पसार परे। त्यतिबेलासम्म श्रेष्ठ भने नयाँ पार्टीको संगठन विस्तारमा लागि सकेका थिए।
त्यो युद्ध समान स्थितिबाट गुज्रिएर अहिले उनै श्रेष्ठ पुरष्कृत भएका छन्। उनि प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको क्याबिनेटमा नेकपा एसको तर्फबाट श्रम तथा रोजगार मन्त्री भएका छन्। आफ्नो हक्की स्वभावले, आफ्नो अडानका कारणले श्रेष्ठ मन्त्री बन्न लायक भएको नेताहरु बताउँछन्। उनले मन्त्रीको रुपमा सम्झन लायक केही काम गर्ने पनि धेरैले अपेक्षा लिएका छन्। आफ्नै व्यापारिक घराना भएका श्रेष्ठलाई कसैले आर्थिक प्रलोभनमा पार्न सक्दैन। त्यसैले पनि मन्त्रीका रुपमा उनलाई जनपक्षीय काम गर्न कसैले रोक्न सक्दैन। जुन कुरामा श्रेष्ठ पनि प्रतिबद्ध छन्। उनले आफूले मन्त्रीका रुपमा शपथ खाइसकेपछि देश र राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर सम्झन लाएक काम गर्ने प्रण गरेका छन्।
त्यस्तै, श्रेष्ठले आफ्नो राजनीतिक सफलताको श्रेय तनहुँका जनतालाई दिने गरेका छन्। उनले आफूलाई साथ, सहयोग र भरोसा गरेकोमा तनहुँका जनतालाई धन्यवाद दिएका छन्। उनले अहिलेको लडाईंमा आफूलाई जनताले साथ र सहयोग गरेको बताउँछन्। ‘हो। तनहुँका जनताले मेरो फेसबुकमा हेर्नुस्, कसैले नराम्रो गरिस् भनेका छैनन्। धन्यवाद र स्याबासी दिएका छन्,’ उनि भन्छन्।
ओलीको किल्ला ‘गण्डकी’ भत्काउने दम राख्छन् किसान !
पार्टी विभाजन पछि हेर्दा ओलीको सबैभन्दा राम्रो पकड गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा देखिन्छ। गण्डकी प्रदेशमा गोरखा र बाग्लुङबाहेक अन्यत्र जिल्लामा एमाले विभाजनको असर कहिँ परेन। पार्टी विभाजन हुँदा गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एस अत्यन्तै कमजोर देखियो। गण्डकी प्रदेशमा सभामा पनि नेकपा एस तर्फ कोही सांसद खुलेनन्। एमाले विभाजनपछि गण्डकीमा हालका हेभिवेट नेता हुन्- श्रेष्ठ। श्रेष्ठले अब गण्डकीको कमान एक्लै हाँक्नु पर्ने भएको छ। उनकै कमाण्डमा नयाँ टिम बन्ने छ।
गण्डकी समग्रमा एमालेको नै किल्ला मानिन्छ। त्यसलाई तोड्न श्रेष्ठले निकै मेहेनत पनि गर्नुपर्छ। पार्टी कमजोर देखियो भनेर लुक्ने स्वभाव श्रेष्ठको छैन। उनले आफू एक्लैले एमालेका १४ जनालाई तह लगाउने हाँक दिएका छन्। केही समय अघि पोखरामा आयोजित विचार गोष्ठी तथा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘अब हामी देखाइदिन्छौं, एकीकृत समाजवादी गण्डकीमा के छ भनेर। यो पार्टीमा गण्डकीबाट म मात्रै निर्वाचित सांसद छु। उनीहरू १४ जना छन्, उनीहरूका लागि म एक्लै भारी पर्नेछ।’
मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश सभाको प्रतिनिधित्व हेरेर पार्टीलाई कमजोर नआँक्न आग्रह गर्छन। श्रेष्ठले गण्डकीमा माधव पक्षलाई तत्कालीन समयमा ओलीले कुनै टिकट नदिएकैले अहिले आफूहरू कमजोर हुन पुगेको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘गण्डकीका १८ वटा क्षेत्रमा एउटा पनि टिकट दिइएन। अनि माधव नेपाल कसरी बलियो हुन्छ? आजदेखि नेकपा एकीकृत समाजवादीले बिगुल फुक्यो, आजदेखि देखाइदिन्छौं हामी कमजोर हो कि के हो भनेर?’
अनेरास्ववियुको राजनितिदेखि मन्त्रिसम्मको यात्रा
व्यापारिक पृष्ठभूमिका श्रेष्ठले कांग्रेस वरिष्ठ नेतालाई हराइदिए !
श्रेष्ठको जन्म २०२४ पुस ७ गते म्याग्दे गाउँपालिका १ को दबुङमा बुवा स्व. केवलबहादुर श्रेष्ठ र आमा लेसकुमारी श्रेष्ठको सन्तानको रुपमा भएको थियो। श्रेष्ठ पञ्चायत कालमा नै विद्यार्थी राजनीतिमा होमिएका थिए। २०३८ सालमा अनेरास्ववियुको सदस्यता लिएका श्रेष्ठले त्यसपछि विभिन्न रुपमा पार्टीगत जिम्मेवारी निभाउदै गए। प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा जेलनेल भोगे। २०५१ सालबाट पार्टी राजनीतिमा सक्रिय रहेका उनले गत चुनावमा तनहुँ-१ मा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई हराएर सांसद चुनिएका थिए। पौडेललाई पराजित गरेका श्रेष्ठ कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवाको क्याबिनेटमा श्रम तथा रोजगार मन्त्री बनेका छन्। २०७४ सालको निर्वाचनमा पौडेललाई श्रेष्ठले ६८१४ मतान्तरले पराजित गरेका थिए। श्रेष्ठले ३४ हजार ४ सय ८९ मत ल्याएका थिए भने पौडेलले २७ हजार ६ सय ७५ मत पाएका थिए।
श्रेष्ठ तनहुँका नाम चलेका व्यापारी हुन्। दमौलीमा उनको किसान हार्डवेयर चर्चित छ। त्योबाहेक हाउजिङ, रियलस्टेट, ग्यास उद्योग र होटल क्षेत्रमा पनि उनको लगानी छ। उनको आफ्नै लगानीमा क्लासिक म्याट्रेस उद्योग संचालनमा रहेको छ। श्रेष्ठ राजनीतिमा व्यस्त रहेको समयमा उनकी धर्मपत्नी अन्जु गोशेली श्रेष्ठले व्यापार व्यवसाय धानेकी छन्।
श्रेष्ठमा लुकाउने-छलछाम गर्ने प्रवृत्ति छैन। श्रेष्ठले मन्त्री भएलगत्तै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिए। मन्त्री बनेको चार दिनमै निर्धक्क उनले सबैभन्दा छिटो आफ्नो अरबाैँको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे। नेपालमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्री नियुक्त भएको चौथो (चार) दिनमै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे।
व्यापारिक पृष्ठभूमि भएकै कारण उनले कोही नेतासँग हात फैलाइरहनु पर्दैन। उनि आफै समाजसेवामा पनि सक्रिय छन्। सांसदको रुपमा प्राप्त हुने सबै तलब भत्ता जिल्लाका विभिन्न संघ संस्थालाई प्रदान गर्ने गरेका छन्। तनहुँमा विकास निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिन करोडौं रुपैयाँको बजेट बिनियोजनको अगुवाइ उनले नै अहिले लिइरहेका छन्।
अहिले श्रेष्ठनेकपा एसको केन्द्रीय सदस्य छन्। उनि संसदको उद्योग वाणिज्य आपूति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको सदस्य रही काम गरिसकेका छन्। उनि नेपाल तेक्वान्दो संघको उपाध्यक्ष पनि रहिसकेका छन्।